स्थानीय SEO को लागि उद्धरण र सह-उद्धरण | Martech Zone
स्थानीय SEO को लागि उद्धरण र सह-उद्धरण
मङ्गलबार, अप्रिल 2, 2013 शुक्रवार, सेप्टेम्बर 14, 2018 Douglas Karr
पेजर्यांक एल्गोरिथ्म ठूलो मात्रामा खेलिएको थियो किनकि एक कालो-टोपी एसईओ व्यक्तिलाई किवर्ड-समृद्ध लि building्क एक साइटमा फिर्ता पुनः निर्माण गर्नु आवश्यक पर्दछ। अधिक समय, लि where्कहरू जहाँ निर्माण गरिएको थियो भन्ने पर्वाह नगरी, साइट श्रेणीमा बढ्नेछ। गुगललाई थाहा थियो कि उनीहरूको खोज इञ्जिन परिणामहरू गेम गरिएको छ र पछि उनीहरूको एल्गोरिदमलाई अन्य गुणस्तर लामहरू लिन मद्दत गर्दछ। लि site्क गर्ने साइटको गुणवत्ता र सामग्रीको प्रासंगिकतामा उनीहरूको भूमिकाको साथै लि .्क गर्ने साइटहरू र गन्तव्य साइटहरू सोशल मिडिया भित्र कत्तिको लोकप्रिय थिए।
उद्धरणहरू के हुन्? सह-उद्धरण?
जब यो स्थानीय खोजी ईन्जिन नतीजाहरू र तपाइँको ब्यापारको लागि श्रेणीकरणको कुरा आउँछ, ब्याकलिks्क र उल्लेख मात्र खेल होईन। Google द्वारा उद्धरण लोकप्रियतामा बढ्न जारी छ स्थानीय खोज परिणाममा वैधता र व्यावसायको अधिकारको निर्धारणको लागि। उद्धरण लिंकहरू होइनन्, ती पाठ हुन् जुन पृष्ठमा अन्य पाठहरू बीच भेदनीय छ। एउटा उदाहरण तपाईको व्यवसायको पूरा ठेगाना र फोन नम्बर हो।
कुनै लिंक बिना, गुगलले तपाईंको स्थानीय व्यापारको लोकप्रियता कतिले तोक्न सक्दछ उच्च गुणस्तरका साइटहरूले तपाईंको व्यवसाय ठेगाना र / वा फोन नम्बर सूचीबद्ध गर्दैछन्। यसलाई उद्धरणको रूपमा चिनिन्छ। र अन्य साइटहरू जुन साइटहरूको माध्यमबाट जडान हुने समान उद्धरण सूचीबद्ध गर्दछ सह उद्धरण हो। यसको बारे सोच्नुहोस् ... कुनै पनि साइटमा सूचीबद्ध ठेगानाले गुगलले सामग्री र स्थानीय व्यापारको बीचमा सम्बन्ध निर्धारण गर्न आवश्यक जडान उत्पन्न गर्न सक्दछ।
पृष्ठमा तपाईंको व्यवसाय ठेगाना र फोन नम्बर सूचीबद्ध गर्दछ जुन तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुञ्जी शव्दहरू छन् अब तपाईंले स्थानीय खोज परिणाममा त्यो कीवर्ड संयोजनको लागि क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
के यसको मतलब तपाई बाहिर जानुहुन्छ र तपाईको ब्यापारको लागि डाइरेक्टरी सबमिशन प्याकेज किन्नु पर्छ? पक्कै छैन। गुगलले कम गुणस्तरका डाइरेक्टरीहरू बिरूद्ध भेदभाव गर्न थालेको छ जुन केवल व्यवसायका लागि लिंक फार्महरू हुन्। जहाँसम्म, तिनीहरू शीर्ष गुणवत्ता साइटहरूमा तपाईंको व्यवसाय जानकारी सूचीबद्ध गर्ने उद्धरणमा बढी ध्यान दिदै छन्। तपाईको काम भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि उपलब्ध गराईएको जानकारी सही छ!
तपाईं मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
समावेश गर्न निश्चित हुनुहोस् व्यवसाय नाम, ठेगाना र फोन नम्बर तपाइँको साइट भर। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सूचीबद्ध जानकारी सबै साइटहरूमा एकरूप छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि हाम्रो क्लाइन्टहरूले प्रत्येक पृष्ठमा यस जानकारी स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गर्नुहोस्।
गुगल र बिंगको साथ तपाईंको व्यवसाय सूचीकृत गर्नुहोस्।
प्रयोग गर्नुहोस् स्थानीय व्यापारको लागि धनी स्निपेटहरू तपाईंको साइट भित्र ताकि खोजी ईन्जिनहरूले आवश्यक भौगोलिक जानकारी लिन सक्दछन्।
जब तपाइँको व्यवसाय को लागी एक लेख मा उल्लेख गर्न को लागी अवसर छ, प्रेस विज्ञप्ति वा ब्लग पोष्ट - निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको पूरा मेल ठेगाना र फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस्। कीवर्डहरूको सामग्री भित्र यी उद्धरणहरू तपाईको लागि प्रासंगिक हुन चाहानुहुन्छ धेरै सहयोगी हुन्छ।
तपाईं कसरी उद्धरण साइटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ?
ह्वाइटस्पार्क एक स्थानीय उद्धरण खोजकर्ता छ। उपकरणले तपाईंलाई कीफ्रेसेस प्रविष्ट गर्न र कुञ्जी चरणहरूको अन्य भिन्नताहरू पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरणले शीर्ष रैंकिंग साइटहरूको लागि साइट साइट लिस्टिंग उत्पादन गर्दछ। साथै, यस प्रणालीले तपाईंलाई ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ जुनसँग तपाईंको पहिले नै भएको उद्धरणहरू छन जसले गर्दा तपाईंले आफ्नो समय बर्बाद गरिरहनु भएको छैन।
टैग: दैनिकउद्धरणसह उद्धरणकोसीटेशनगुगल उद्धरणस्थानीय खोजीखोज इञ्जिन पत्रिका
मेलबक्सको साथ, म इनबक्स शून्य बनाउन सक्छु
१ Characters० वर्ण वा कममा ब्यापार रणनीति